Golaha wasiiradda cusub oo lagu amray inay saxiixaan labo qodob oo halis ah (DHAGEYSO) – Bulshoweyn Online | Your Source Of News And Entertainment
Golaha wasiiradda cusub oo lagu amray inay saxiixaan labo qodob oo halis ah (DHAGEYSO)
Golaha wasiiradda cusub ee xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa lagu soo rogay amaro cusub oo ka kooban labo qoddob oo laga doonayo inay soo saxiixaan kahor inta aysan xilalka kala wareegin wasiiradda hore.
Wasiirka warfaafinta ee xukuumadda federaalka Soomaaliya Injineer C/raxmaan Cismaan Cumar (Yariisow) ayaa saxaafadda u aqriyay labo qodob oo kala ah in wasiiradda cusub ay ballan qaadaan islamarkaana ay soo buuxiyaan foomam ay ku qoran yihiin Dokumentiyo muhiim ah oo ay ka mid tahay qoraal ka hadlaya anshaxa iyo inay u shaqeyaan si daacadnimo ah.
Sidoo kale, qoddobka labaad ayaa ah in wasiiradda cusub ay soo saxiixaan warqad ay ku caddeeynayaan hantidooda gaarka ah oo ay leeyihiin, si markii loo baahdo isla xisaabtan uu yimaado.
Dhinaca kale, qodobka koowaad ayaa caddeeynaya in xubinta ka mid ah golaha wasiiradda ay ku shaqeeyaan si daacad ah, islamarkaana ay u hogaansamaan xilalka loo dhiibay, hadii ay fullin waayaanne in shaqada laga saari doonno.
Wuxuu sidoo kale qodobka labaad uljeedkiisu yahay in la xakameeyo musuq-maasuqa islamarkaana laga hortago wax allaale wixii dhib keeni kara.
Illaa iyo haatan lama oga sida ay wasiiradda cusub ku fullin doonaan labadaasi qodob, maadaama la ogyahay in hantida ay lunsadaan madaxda sare ee dalka ay dad kale ku qoraan ama u dhiibtaan.